Mogadishu Journal » Mendes: Ronaldo waligiis uma qalmin Ballon d’Or
Wakiilka Jorge Mendes ayaa sheeganaya in macmiilkiisa Cristiano Ronaldo “uusan waligiis u qalmin abaalmarinta Ballon d’Or” kadib guulaha shaqsiyeed ee uu gaaray heer koox iyo heer caalami.
Xiddiga reer Portugal ayaa ku soo laabtay Manchester United isagoo ka yimid Juventus ka dib sannad guulo leh marka loo eego rikoorrada shaqsiyeed, oo ay ka mid tahay inuu noqday gooldhaliyaha ugu sarreeya abid ee caalamiga ah halka uu sidoo kale ku dhameystay hogaamiyaha ugu sarreeya Serie A 2020-21.
Halyeeyga weerarka ah ayaa sii waday inuu xilli ciyaareedkan u ciyaaro United, isagoo dhaliyay shan gool lix kulan oo uu saftay tartamada oo dhan Red Devils.
Ronaldo ayaa aad ugu yar guulaha kooxda iyadoo Juventus ay aragtay qabashadii horyaalka Talyaaniga oo la jabiyay, kuna dhameysatay kaalinta afaraad, halka sidoo kale laga reebay Champions League wareegii 16-ka, Portugal ayaa guuldaro kala kulantay Belgium isla marxaladii Finalka Euro 2020.
Si kastaba ha ahaatee, Mendes ayaa dareensan in 36-jirka guulaha la taaban karo ee shaqsiyadeed ay tahay inay ka dhigaan kan ugu horreeya abaalmarinta la doonayo.
“Lambarada iyo tirakoobka ku lifaaqan magaca Cristiano Ronaldo ayaa iska hadlaya waana inay ku filnaadaan inuu ku guuleysto Ballon d’Or kale,” ayuu Mendes u sheegay France Football.
Wadarta guud ee cajiibka ah ee 115 gool ee xulka qaranka Portugal ayaa ka dhigaysa inuu yahay rikoorka rikoorka taariikhda kubbada cagta caalamiga ah ee ragga taariikhda kubbadda cagta xirfadeed.
“Dhammaan guulahaas, oo matalaya waxqabadkii ugu weynaa taariikhda kubbadda cagta, waa inay noqdaan kuwo muhim u ah abaalmarinta koobka, maadaama uu sii wado inuu muujiyo inuu yahay, shaki la’aan, ciyaaryahanka kubadda cagta adduunka ugu wanaagsan abid.
“Waa run in kani yahay koob shaqsi ah, laakiin yaan la iloobin in Cristiano Ronaldo uu ahaa gooldhaliyaha ugu sarreeya Serie A ee dalbanayey sidoo kale wuxuu ahaa gooldhaliyaha ugu sarreeya Koobkii Yurub ee ugu dambeeyay [isaga oo ka dhigaya gooldhaliyaha ugu sarreeya abid ee tartankaas ].
“Waxa uu heystaa rikoorka goolasha ee Champions League waana ciyaaryahanka kaliya ee adduunka ku guuleystay wax walba seddex dal oo kala duwan oo leh tartan ugu badan, sida ka dhacday England, Italy iyo Spain.
“Waxaas oo dhan anigoo 36 jir ah, oo leh gabi ahaanba si gaar ah, ballanqaad iyo karti cajiib ah oo looga gudbi karo dhibaatooyinka wax badan. "
Ronaldo ayaa wajahaya tartan adag haddii uu doonayo inuu ku guuleysto Ballon d’Or -ka lixaad, si kastaba ha ahaatee, weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa dhaliyay goolasha ugu badan dhammaan tartamada kooxaha dhexdooda ciyaartoy shanta horyaal ee ugu waaweyn Yurub xilli ciyaareedkii hore (48, 12 in ka badan Ronaldo) iyo wuxuu hore u maamulay 13 ereygan.
Dhanka kale, ciyaaryahanka khadka dhexe Jorginho ayaa loo saadaalinayaa inuu yahay tartame ka dib markii uu Chelsea kula guuleystay Champions League iyo Euro 2020 oo uu la qaaday Italy.